Mozilla Firefox သည်စာဖတ်သူအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုလား။ | eReaders အားလုံး
Mozilla Firefox သည်စာဖတ်သူအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုလား။
ဒီနေ့ခေတ်ကျော်ကြားလှတဲ့အခမဲ့ဘရောက်ဇာ၊ Mozilla Firefox ကို ၎င်းကို Desktop ပေါ်တွင် Mozilla Firefox 49 သို့ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုကိရိယာများတွင်အဆင့်မြှင့်တင်နေသည်။ ဤမူကွဲအသစ် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သိသိသာသာတိုးတက်မှုဆောင်တတ်၏Browser နှင့်တစ်နေ့လုံးအလုပ်လုပ်သူများအတွက်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် ထည့်သွင်းသောသစ်ကိုစာဖတ်ခြင်း function ကို.
Mozilla Firefox သည်အမြဲတမ်းရှိနေသည် ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာသည်သုံးစွဲသူများ၏စာဖတ်ဝါသနာများကိုကျူးလွန်သည်၊ Pocket ကို၎င်း၏ browser ထဲသို့ပထမဆုံးထည့်သွင်းခဲ့ပြီးသင်အများစုအသုံးပြုသော screen read service ဖြစ်သည်။
Mozilla Firefox offline mode သည်ဆောင်းပါးများ၊ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်အခြားဖတ်ရန်ရွေးချယ်စရာများကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်
ယခုနောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြှင့်မှုဖြင့် Mozilla သည်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် web browser အား၎င်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအော့ဖ်လိုင်းတွင်ပေးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်စာဖတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဝင်နိုင်သည် နောက်ပိုင်းတွင်အတွက်သိမ်းဆည်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြတ်တောက်ပြီးနောက်၎င်းသည်ဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏ cache ထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားသကဲ့သို့ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နောက်မှဖတ်ခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်တွင်၊ browser သည်ဖောင့်၊ အရွယ်အစား၊ အကွာအဝေး၊ pagination စသည်တို့ကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ebook ဖတ်သည့်အခါ eReaders တွင်တွေ့ရသောကိုယ်ပိုင်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာလူအများတို့သည် Mozilla Firefox ကိုစာဖတ်ခြင်းဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုအနေဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ pdf ဖိုင်များသို့မဟုတ် ebooks များကိုဖတ်နိုင်သည့်အခွင့်အရေးရှိသည်။ browser extension ကို.
ဤ update သည် Mozilla Firefox ၏မည်သည့်ဗားရှင်းတွင်မဆိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများနှင့်တက်ဘလက်များတွင်သာမကသင်သိသည့်အတိုင်းများစွာသောတက်ဘလက်များတွင်တွေ့ရသော Android ဗားရှင်းများအတွက်။ က) ဟုတ်တယ်၊ တက်ဘလက်များပေါ်တွင်စာဖတ်ခြင်းတိုးတက်စေရန် ဦး တည်နောက်ထပ်ခြေလှမ်း.
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ Mozilla Foundation သည်စာဖတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကိုစိတ် ၀ င်စားသည် ကိုယ်ပိုင် browser တွင်အပြာရောင်အလင်းလည်ပတ်မှုလုပ်ဆောင်နိုင်သည် အချိန်ဇယားဖတ်ရန်အတွက်စိတ်ကြိုက်ဖောင့်များ Firefox တွင်မိတ်ဆက်ရန် Mozilla အားအဘယ်စာဖတ်စွမ်းရည်ကိုတောင်းဆိုမည်နည်း။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » Software များ » Mozilla Firefox သည်စာဖတ်သူအက်ပလီကေးရှင်းအသစ်တစ်ခုလား။
ကောင်းတဲ့အကြံပဲ။ အခုအချိန်မှာ browser (ဘေရာက္ဆာ) တွေဘယ်ဟာကိုသုံးရမှန်းတောင်မသိသေးဘူး။ အချက်အလက်အများကြီးကိုကြည့်ပြီးပြီ။ ငါဒီ browser ကိုမိုဘိုင်း၊ တက်ဘလက်နဲ့ Mac တို့မှာသုံးဖို့ရွေးချယ်လိုက်ပြီ။ chrome html5 test တွင်ရမှတ်များပိုများသည်
အမေဇုံက၎င်း၏ Kindle for Kids ကိုမွမ်းမံသည်
E-ink နှင့် Toppan သည် ၃၂ လက်မအရွယ် E-ink ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အရောင်ကိုပြသသည်